I-China ye-CPLA ePlasitiki engenasiphene Inokulungiswa okusisigxina eVumayo -Isixhobo somatshini kunye neMveliso | Gianty
Ikhithi yezixhobo ezifanelekileyo zeliphi na ipati, uhambo okanye ipikniki. Ummese wethu oqinileyo, ifoloko, isipuni kunye namachaphaza amhlophe angena ngesangqa somatshini. I-CPLA esekwe kubushushu obuphezulu sisiseko esinokuphinda senziwe ngeplastiki. Kulungile ukuya kuthi ga kwi-85 ℃. Umbala otyheliweyo omhlophe-umbala omhlophe.
Izinto zokusika ezomxokelelwano ziyimfuneko ekufuneka unazo nakuphi na ukusekwa okungafunekiyo ujonge ukunciphisa unyawo lwekhabhoni kwaye luhlaza! Ii-CPLA kits zenziwa ngePry ye-PLA okanye ngeplastiki eyenziwe ngombona. I-CPLA sisibonelelo esivuselelekayo njengoko ngokwemvelo ithathelwa indawo yindalo ixesha elide, kwaye inikezela ngakumbi ukumelana nobushushu kune-PLA yendabuko. I-PLA imele i-polylactic acid kwaye inike enye indlela yemveliso zeplasitiki zesiko.
Sebenzisa izixhobo zokusika ukubonelela abathengi zonke izinto ezisikiweyo kunye nezixhobo abazifunayo ukuze bonwabele izidlo zabo! Ukusuka kwiifolokhwe ze-CPLA, iisheyikhoni, kunye neenkabi zokunxiba, ezi kiti zifanelekileyo zigqunywe ukuze abathengi bafumane iphakheji yococeko abanokuhamba nayo ekuhambeni.
Ukuchetywa kwethu akulungelanga ukuba kuprintwe. Ingxowa inokuphawulwa ukusuka kwinani elincinci loku-odla iziqwenga ezingama-200,000. Sinikezela ngezixhobo ezahlukeneyo zokusika ngokweemfuno zabathengi. Unokukhetha kuzo naziphi na izinto zethu zesitokhwe kwaye uchaze indibaniselwano enqwenelekayo yezinto. Ngolwazi oluthe kratya, ungathumela imibuzo ku- info@ecogianty.com.
Into I-CPLA 7 intshi ye-Cutlery Kit ene-Compostable Bag
Isixhobo seBhegi I-foil esebenzayo
Ubungakanani bebhokisi 50 * 22 * ​​47cm
Into I-CPLA 6.5 intshi ye-Cutlery Kit ene-Compostable Bag
Into I-CPLA 6 intshi ye-Cutlery Kit ene-Compostable Bag
Ubungakanani bebhokisi 50 * 22 * ​​45cm
Edlulileyo: I-CPLA yeplasitiki engenasiseko Sokuphelisa I-Cutlery ekhutshiweyo-Ingxowa yephepha
Okulandelayo: I-CPLA eCwecwe lokuSika iBhokisi yokuThengisa kunye neBhokisi yokubonisa iTi-away